पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको गाडीले ठ’क्क’र दिँदा श्रीमतीको नि,*धन, श्रीमान् घा*,इते : घ*,टना लुकाउन प्रहरी नै सकृय ! – AB Sansar
September 28, 2020 adminLeaveaComment on पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको गाडीले ठ’क्क’र दिँदा श्रीमतीको नि,*धन, श्रीमान् घा*,इते : घ*,टना लुकाउन प्रहरी नै सकृय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काले चलाएको गाडीको ठ क्क रवाट एक महिलाको नि,धन भएको छ भने उनका श्रीमान घा,इते अवस्थामा उपचारार्थ छन् । खड्काले चलाएको बा ११ प ४१४१ नम्बरको प्राडो कारले जेब्रा क्रसिङमै दम्पत्तीलाई ठ क्क र दिएको हो ।
महिलाको अस्पताल नपुग्दै नि,धन भयो भने श्रीमानको अहिले उपचार भइरहेको छ । सो घ,टनामा खड्कालाई जोगाउन प्रहरी नै सकृय भएको आरोप पी डि तले लगाएका छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–६ का विक्रम कार्की र उनकी श्रीमती अनुपा पाण्डे कार्कीलाई गत बुधबार ठ क्क र दिएको प्रहरीले बताएको छ । मन्त्री खड्कालाई जोगाउन कार्की दम्पतीलाई मोटरसाइकलले ठ क्क र दिएको बनाउन खोजिएको छ ।
तर, प्रत्यक्षदर्शीले भने उक्त कारले ठ क्क र दिएर भागेको र पछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । हाल अनुपाको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै रहेको छ भने खड्काका विरूद्ध घा,इते अवस्थामा रहेका उनका पतिले महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जमा किटानी जाहेरी दिएका छन । प्रहरीले भने उनीहरुलाई कारले नभइ मोटरसाइकलले ठ क्क र दिएको बताएको छ । मोटरसाइकलको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कहिले खुल्छ नयाँ चालक अनुमतिपत्र ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण सहित !